Voatendry ho mpandrindra ny tetikasa ao amin’ny BNGRC, Andriamatoa Faly Aritiana Fabien. Voatendry ho tale misahana ny “Patrimoine et de l’administration ao amin’ny BNGRC kosa ny Général de Brigade Ramanantsoa Gabriel.
Ankizy 157 tamin’ireo fokontany tao anatin’ny boriborintany VI no nahazo kopia maimaimpoana. Niarahana tamin’ny fikambanana Koloina ny hetsika.
Maro ireo mponina sahirana ao an-toerana no nitaraina amin’ny tsy fananany ho enti-manana amin’ny fikarakarana ny kopian-janany, indrindra amin’ny fotoana hampidirana ny ankizy any an-dakilasy ka nanaovana ny hetsika.
Teny amin’ny kaominina Ivato no nanaovana ny ezaka kopia faobe, tamin’ity herinandro ity, Manodidina ny 200 ireo ankizy sy olon-dehibe hisitraka izany avy amin’ireo fokontany 11 ao an-toerana. Dingana voalohany izao natao izao izay nanaovana ny fizahana ataon’ny dokotera avy amin’ny CSB Ivato. Efa fanao isan-taona ny ezaka kopia faobe izay hanentanana ireo olona tsy mbola manana izany.
Hifarana anio ny andron’ny vaksiny faobe iarovana ny kilonga vao teraka ka hatramin’ny 5 taona amin’ny aretina lefakozatra. Ankizy 2 tapitrisa sy sasany amin’ny distrika 55 ao anatin’ny faritra 10 no hahazo ny vaksiny hanamafisana ny hery fiarovana sy hitsinjovana ny zaza malagasy. Mamindra amin’ny zaza 200 ny ankizy tsy vita vaksiny satria mbola ambony ny tahan’ny fangerena ankalamanjana mampiparitaka haingana ny valanaretina. Entanina ny reny sy ny mpikarakara zaza rehetra handray ny mpanao vaksiny satria hitety trano, sekoly ary ho tonga hatreny an-tsena izy ireny hanatrarana ny tanjona napetraka.